10 PC Imidlalo edinga izidingo ezimbalwa | Izindaba Zegajethi
10 PC Imidlalo edinga izidingo ezimbalwa
Ubuchwepheshe buthuthuka ngokwedlulele futhi singabona lokhu kubonakala kunoma iyiphi indawo yempilo yethu. Emhlabeni wemidlalo yevidiyo lokhu kuthuthukiswa akunakwa futhi sibona imidlalo eminingi enamandla amakhulu kanye nomhlaba obanzi kakhulu. Lokhu kusho ukuthi uma sifuna ukuqhubeka nokudlala imidlalo yamanje, amaqembu ethu azohlupheka kakhulu ngokuyikhipha., njengoba zisidinga amandla engeziwe.
Ezinkundleni ezinjengama-consoles, asinayo le nkinga, ngoba esikhundleni sokudinga ukuthuthukisa izisetshenziswa, onjiniyela abafuna ukuthuthukisa imidlalo yabo ukuze isetshenziswe kusistimu ngayinye. Lokhu akwenzeki ku-PC lapho thina basebenzisi kuyibo okufanele silungise umdlalo noma izinto zethu zokusebenza ukuze sijabulele imidlalo yevidiyo ngendlela ezinzile, yingakho Kulesi sihloko sizokusiza ngokwenza phezulu kwemidlalo eyi-10 ehamba phambili esingadlala kuye neqembu elidala noma elithobekile.
1 Yiziphi izidingo zomdlalo?
2 Imidlalo engu-10 ehamba phambili enezidingo ezimbalwa
2.1 UDiablo 2 Uvusiwe
2.5 I-Stardew Valley
2.6 I-Two Point Hospital
2.8 Abafana beGay
2.9 Phakathi kwe-U
Yiziphi izidingo zomdlalo?
Imidlalo yevidiyo iyisofthiwe edinga ihadiwe ukuze isebenze, lezi zidingo zisukela iphrosesa, ihluzo, uhlobo lwememori kanye nenani, noma isistimu yokusebenza ngokwayo. Uma umusha umdlalo, uvame ukucela amandla engeziwe kanye nehadiwe yesimanjemanje neyamanje. Kodwa kukhona okuhlukile futhi kunjalo imidlalo ye-indie naphezu kokuthi iyintsha, ijwayele ukusebenzisa ihadiwe endala kanye nobubanzi obuphansi kakhulu.
Elinye iphuzu okufanele ulikhumbule ukuthi ukuthenga ikhompuyutha entsha akukuniki ukufinyelela kuyo yonke imidlalo yamanje, njengoba kunezigaba ezahlukene zezingxenye, ngakho-ke ikhompuyutha endala esezingeni eliphezulu izoqhubeka inekhono kakhulu kunekhompyutha entsha. ibanga eliphakathi noma eliphansi. Lokhu singakubona ikakhulukazi ebangeni le amakhompyutha aphathekayo, lapho singathola khona amakhompyutha amasha ngokuphelele angakwazi ukuhambisa imidlalo eyisisekelo kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi izingxenye zalawa ma-laptops zibiza kancane noma zihlanganiswe ebhodini ngokwalo futhi zenzelwe imisebenzi yansuku zonke.
Ukuqinisekisa ukuthi i-PC yethu ihlangabezana nezidingo zomdlalo, kungcono kakhulu ukusebenzisa uhlelo CPU-Z futhi siqinisekise ukuthi izingxenye zekhompyutha yethu zihambisana nobuncane obudingwa igeyimu okukhulunywa ngayo. Izidingo zomdlalo zingabonwa esitolo seSteam noma se-Epic uqobo.
Imidlalo engu-10 ehamba phambili enezidingo ezimbalwa
UDiablo 2 Uvusiwe
Ingasoze yabuna phakathi kwezakudala evuswe ngesigaba esisha, esivuselelwe kakhulu sesithombe. Lo mdlalo wevidiyo umayelana ne-a I-RPG yakudala, lapho ukulima nokudala iqembu lethu kuyingxenye ebaluleke kakhulu yomdlalo. Inguqulo yasekuqaleni isukela ngonyaka ka-2000 futhi yashintsha uhlobo lwendima yesenzo, yaba iphayona kulolu hlobo lomdlalo wevidiyo.
Umdlalo wevidiyo ugqama ngokujula kwawo uma kuziwa ekudaleni umlingiswa wethu kanye nokuwuthuthukisa kuze kufike emikhawulweni engasoleki, okudala inunu ekwazi ukucekela phansi inqwaba yezitha ngokuqubuka okukodwa. Sinemodi yabadlali abaningi kuze kufike ku-8 abadlali ngokubambisana nge-Battlenet. Ngaphezu kokwabelana ngolwazi lwethu lokuqothula amademoni nabanye abangani abangu-7, singaphinde sihwebe futhi silwe nawo, ngaleyo ndlela senze umdlalo onamathuba angenamkhawulo, esingayeki kuwo ukuthola izimfihlo.
Singathenga i-Diablo 2 Evusiwe esitolo se-Battlenet nge-€ 39,99
I-Minecraft ayikwazi ukushoda kunoma iyiphi indawo ephezulu ebiza usawoti wayo, kancane kakhulu kuleli cala, sifuna ukusebenza okungcono kakhulu ngehadiwe elincane. Umdlalo we Indima yesenzo lapho sihlanganyela khona nomhlaba ovulekile osuselwe ekwakhiweni nasekulimeni. Futhi singabelana ngolwazi nabangani ngenethiwekhi futhi sibhekane nezinselelo umhlaba ngamunye osilethela zona.
Yize umdlalo mukhulu, ihluzo zawo azikho isidingo, ngakho-ke noma yiliphi iqembu lizokwazi ukuwuhambisa ngaphandle kwenkinga. Ubude bayo abunamkhawulo ngakho-ke ngeke sizikhiphe ku-PC yethu uma singafuni emahoreni amaningi.
Singathenga iMinecraft kuSteam nge-€ 19,99
Ubaba wabadubuli bomuntu wokuqala abaqhudelanayo, futhi kuwumdlalo ongabekezeleleki ku-hardware njengoba isebenzisa isisekelo esidala futhi ishintshile kancane ngokuhamba kweminyaka. Nakuba igeyimu ingakhangi kakhulu, ijabulisa kakhulu esingayithola uma sifuna umdlalo wokudubula ku-inthanethi.
Isisekelo silula, kuqubuka impi phakathi kwamaqembu amabili bese sikhetha ukuthi singamaphoyisa noma amaphekula.Umgomo wethu kuphela ukunqoba. Yiqiniso, amaphoyisa kuzodingeka avale isiqhumane esibekwe amaphekula futhi uma ungumphekula kuzodingeka uvimbele amaphoyisa ukuba angasivala.
Singathenga i-CSGO ku-Steam mahhala
Kulesi senzakalo sibhekisela kugeyimu yesu ngokugqwesa kwe-PC, akunakuba ngaphandle kweNkathi Yokungafi Yemibuso enguqulweni yayo yokugcina yencazelo ephezulu. Nokho ngalokhu kuthuthukiswa umdlalo unezidingo eziphansi kakhulu futhi uzokwazi ukugijima cishe kunoma yiliphi iqembu.
Inguqulo ebuyekeziwe yalesi sakudala ihlanganisa imikhankaso emi-3 nempucuko emi-4 esingachitha ngayo amahora amaningi sidala amabutho ethu ukuze anqobe indawo yesitha, manje esinezithombe ezithuthukisiwe kodwa esigcina ingqikithi eyasithakasela ngaphezu kweminyaka eyishumi edlule.
Singathenga i-AOE 2 DE kuSteam nge-€ 19,99
I-Jewel, igama eliphelele lokuchaza lo mdlalo, ukalwe yibo bobabili abadlali nabagxeki njengomsebenzi wobuciko naphezu kwalokho ongase ubonakale ngenxa yobuhle bayo be-retro. Kungase kubonakale kulula kodwa umdlalo uhilela i-adventure ejulile futhi ende njengabanye abambalwa, kuyo kufanele sinikeze impilo epulazini elidala esalizuza kumkhulu wethu.
Isisekelo sibonakala silula, kodwa kulo mdlalo wokulingisa ngeke nje sinakekele konke ukutshalwa kwepulazi nemfuyo yethu.Uma kungenjalo, kuzodingeka futhi siqaphele ubudlelwano nawo wonke umphakathi wabalimi futhi sithuthukise isimilo sethu kanye nekhaya lethu. Sinethuba lokuhlola amanye amapulazi.
Singathenga i-Stardew Valley ku-Steam nge-€ 13,99
I-Two Point Hospital
Uma, njengami, ungomunye walabo abajabulela Isibhedlela Esiyinganekwane eminyakeni engu-20 edlule, ngokuqinisekile uzosijabulela lesi Sibhedlela Samaphuzu Amabili, kuyisu kanye nomdlalo wokuphatha izinsiza lapho siphatha isibhedlela esingayeki ukufika. iziguli ezihlanyayo futhi kufanele sizinakekele noma ngabe ukugula kwazo.
Umgomo wethu kuzoba ukunakekela ukuthi iziguli zethu zifika ziphephile lapho ziboniswana futhi zishiye isibhedlela sethu ziphile saka.. Amahlaya ayanda kanye nokushuba kwesimo lapho silwa nezifo eziwumshayabhuqe noma amagagasi abandayo phakathi kwezinye izehlakalo.
Singathenga Isibhedlela Samaphuzu Amabili esijabulisayo ku-Steam ngo-€ 34,99
Ukusinda nomhlaba ovulekile kuhlangana ndawonye kulo mdlalo omangalisayo iphakamisa ukuthi sisinde emhlabeni we-post-apocalyptic lapho izitha zethu zingabo bonke abadlali abaku-inthanethi. Bazozama ukusibulala nokusiphanga ukuze sithole izinsiza zethu, besebenzisa izikhali noma izicupho.
Sizoqala i-adventure singenalutho Kodwa ngokuhlola, sizothola izinto zokusetshenziswa nezindlela zokupheka zokwenza ikhaya lethu, njengezikhali noma amathuluzi okusebenza. Isikhathi sincane njengoba ingozi ihlezi isicashile asazi ukuthi sizotholani, kwazise izitha zingasihlanganisa nazo uma sinezinsiza eziningi futhi sihlome siphelele.
Singathenga i-Rust ku-Steam nge-€ 39,99
Umdlalo owavusa umunyu ngezikhathi zodlame kwaba lo mdlalo wephathi ogcwele amageyimu amancane wesitayela samahlaya aphuzi esihlanganisa esiphakamisweni esijabulisayo lapho siqhudelana khona kuze kube. I-60 jugadores. Umdlalo uqukethe uchungechunge lwezivivinyo kanye izifundo eziyizithiyo lapho kumele sisheshe ukwedlula izimbangi zethu ukuze siwine.
Isigaba sobuchwepheshe silula ngakho ngeke sibe nezinkinga lapho sisenza kukhompyutha yethu, noma ngabe siyisisekelo kangakanani.
Singathenga ama-Fall Guys ahlanyayo ku-Steam nge-€ 19,99
Omunye waleyo midlalo eyasusa umsindo ku-Streamers yilo mdlalo omnandi wabadlali abaningi, lapho sihlangana nabantu abaphakathi kuka-4 no-10, kula maqembu amabili akhiwa lapho ababili bengabakhohlisi abafuna ukubulala abasebenzi bomkhumbi-mkhathi. Nakuba inhloso yabasebenzi bemikhumbi kuwukwenza umsebenzi wabo wasekuseni emkhunjini, abakhohlisi kumelwe benze umonakalo ngokulawula umkhumbi.
Izenzo zethu zizohlukanisa izisebenzi futhi kuzofanele sisizakale uma omunye wabo eyedwa ukuze ambulale, ngoba uma elinye ilungu labasebenzi libona ukuthi sibulala uzosikhipha futhi abasebenzi bazosixosha emkhunjini. . Ngisho sebeshonile abadlali bayaqhubeka nokudlala njengezibukeli ngaphandle kokuxhumana nabanye, kodwa benza imisebenzi.
Singathenga Phakathi kwethu kuSteam ngama-euro ayi-2,99 kuphela manje ekunyusweni
Siqeda phezulu ngalokho okungokwabagxeki kanye nakomdlali, okukodwa kobucwebe beshumi leminyaka eledlule. Isenzo nokudubula ngomshini ojwayelekile we amapulatifomu esingawabona emidlalweni efana ne-MetalSlug kodwa enobuhle obuhle isethwe kumakhathuni amadala, afana kakhulu namafilimu okuqala e-Disney ngeminyaka yawo-30s.
Ungalenzi iphutha, ubuhle bayo obuhle futhi obujabulisayo akusho ukuthi sibheke ukuhamba, i-adventure igqama ngobunzima bayo ngakho ukweqa umhlaba wabo we-macabre ogcwele izitha kuzoba inselele kumlingisi wethu oyinhloko. Umsebenzi wobuciko oyiqiniso okufanele siwuqinisekise ngoyebo noma yebo, ikakhulukazi uma sicabangela ukuthi cishe noma yiliphi iqembu lizokwazi ukuwuqhuba kalula.
Singathenga i-Cuphead ku-Steam nge-€ 19,99
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » 10 PC Imidlalo edinga izidingo ezimbalwa
Yeka inothi elibi, azikho izixhumanisi nazo zonke izinkokhiso ezizuzwe ngokungalandeli !!
Impendulo ivela ku- israHell
Siyabonga ngesiphakamiso, izixhumanisi zengeziwe. Sizoqaphela ukwengeza isincomo semidlalo yamahhala kuphela ngokuzayo.
Gada i-AOC Gaming U28G2AE / BK
I-ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, iyadlala futhi iyiprimiyamu [Ukuhlaziya]